करिब ३ घण्टा यौन आनन्द दिन्छ प्याजले, कसरी प्रयोग गर्ने ? जानी राखौ !::आर एम खबर
एजेन्सी– प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौन क्षेत्रमा बृद्धि । प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको समाधानमा पनि कामयावी हुन्छ ।
आहार विशेषज्ञ तथा यौन रोग विशेषज्ञहरुका अनुसार प्याजको सेवनले खानामा रुची त बढाउँछ नै साथै यसले यौनिक कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ ।शुखी तथा सन्तुष्ट वैवाहिक जिवनका लागि शंम्भोग शक्ति प्रवल हुन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि प्याज एक अचूक उपाय बन्न सक्ने बताइएको छ ।विशेषज्ञहरुका अनुसार यौन शक्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्याज एक सस्तो तथा सुलभ विकल्प हो । प्याजका फाइदा यस्ता छन्
१.सेता प्याजको रस, अदुवाको रस, शुद्ध मह र घिउ ५–५ ग्राम मिलाएर हरेक बिहान सेवन गर्नुहोस् । एक महिनासम्मको नियमित सेवनले तपाइँमा यौन क्षमता वृद्धि भएको पाउनुहुनेछ ।रातो प्याजको रस र घिउ दुधमा मिसाएर दिनहुँ खाने गर्नुहोस् । शिघ्रपतनको समस्या भएका हरुका लागि प्याजको प्रयोग निकै लाभदायी हुन्छ । प्याजको रसमा सम्फोको रस मिलाउनुहोस् अनि त्यसमा घिउ र चिनी समेत मिलाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् ।यसले शिघ्रपतनको समस्या कम गर्नेछ ।
साथै प्याजको रस र मह मिलाएर नियमित सेवन गर्दा पनि शिघ्रपतनको समस्या कम हुन्छ । मासको दालको पिठो बनाएर त्यसमा प्याजको रसले मोल्नुहोस् र त्यसलाई दूधमा पकाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् । यसले तपाइँको यौन क्षमतामा वृद्धि गर्ने एक अध्ययन ले देखाएको छ । महिलाको भन्दा पुरुषमा यौन शक्ती कमजार हुने र छिटै सिथिल हुने भएकाले पनि पुरुषले विभिन्न औषधीहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर त्यो भन्दा प्याजको सेवन धेरै राम्रो हुन विज्ञहरुको भनाई । प्याजको नियमित सेवनकै कारण यौन क्षमता बढेको विज्ञहरुको भनाई छ ।